Melet တံတားအစားထိုးတည်ဆောက်ထားသောတံတားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် - RayHaber
Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ52 ကြည်းတပ်တံတား meleti အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ငန်း Continues အခါတံတားပေါ်တွင်တည်ဆောက်
05 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 52 ကြည်းတပ်, အထွေထွေ, hyperlink များ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
insa အတွက်တံတားကအခြားရွေးချယ်စရာဂျပေါ်တွင်အလုပ်ဆက်လက် meleti တံတား
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler, တာကပင်လယ်နက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတံတားတည်ဆောက်ခဲ့ကမ်းရိုးတန်းလမ်း Meletti အပေါ်တံတားမှအခြားရွေးချယ်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်သစ်တစ်ခုတံတားများအတွက်မလြော့အပေါ်ဆက်လက် Meleti မြစ်လမ်းမကြီး၏ပဏာမခြေလှမ်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ။ စုစုပေါင်းလမ်းနှင့် ဆက်စပ်. ကမီတာနက်ရှိုင်း Fore-မီတာရှည်လျားသောတံတားပုံခိုင်မာစေ 25 236 33 အတွက် 111 သန်းအကြောင်းကိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
"တံတား BRIDGE ဝန်ဆောင်မှု၏လကုန် BE လိမျ့မယျ"
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Gul ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကအခြားရွေးချယ်စရာတံတား Meleti မြစ်ပွေးဆက်လက်အပေါ်ပြုရန် ", ပြီးစီးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပစ်မှတ်ထားများ၏အသွားအလာကိုတံတားသက်သာရာမယ်လို့ကြည်းတပ်လ-အဆုံးအခြားနည်းလမ်း။ အရှည် 236 မီတာ, ကြီးစွာသောအတိုင်းအတာရန်အသွားအလာဝန်လျှော့ချရန်သာငါတို့မွို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များအဘို့, 13 မီတာကျယ်ပြန့်တံတားတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်, အောက်တိုဘာလကုန်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့တံတားပြီးစီး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ဟာစတင်ဆင်းလှသောစီမံကိန်းကိုရှိသည်နှင့်ပြီးအောင်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
အရေးကြီးသောအလုပ်ညွှန်ပြ Ordu မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာတိုးပွါးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် Mehmet Hilmi Guler "ဟုအဆိုပါတပ်မတော်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအလုပ်တစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်သန်းနေ့ရက်ကိုအတူတိုးမြှင့်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ဥပမာတစ်ခုသက်သေခံနေကြသည်။ အတူတူလမ်းဘက်နှင့်အတူက 25 သန်းစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုအဘို့အတစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အလုပ်တတိယတံတားပေါ်ဆက်လက် 29 / 01 / 2015 အလုပ်အစ္စတန်ဘူလ်3တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်တတိယတံတားပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာတံတားပေါ်တွင်အလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘယ် 20133အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား Marmara အဝေးပြေးစီမံကိန်းတွင်ဒေသအများအပြားတွင်အလုပ်လုပ်ရန်တံတားနှင့်ဆက်လက်။ ပထမဦးဆုံးသံမဏိတံတားကုန်းပတ်ချထားပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တထောင်6500 600 လုပ်သားများနှင့်စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာရဲ့အလုပ်များတွင်အသုံးပြုကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်တွေ။
တစ်ဦးကစက္ကန့်အစားထိုးတံတားတံတား meleti အပေါ်ပြုမိနေပါသည် 07 / 08 / 2019 အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ကြည်းတပ်ပင်လယ်နက်ပဏာမကမ်းရိုးတန်းလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသောမြစ် Melet ကျော်အသစ်တစ်ခုတံတားတည်ဆောက်နေသည်။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler, "က Black ကမ်းခြေလမ်း Meletti အပေါ်တံတားကျော်ဒုတိယတံတားတစ်ခုအစားထိုးအလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ စစ်တပ်က Meleti မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေတံတားပေါ်တွင်အရှေ့ပိုင်းပင်လယ်နက်ဒေသအတွက်အသွားအလာ၏ကျောရိုးသစ်တစ်ခုတံတားများအတွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းလေ့လာမှုများအတွက် Mehmet Hilmi Guler အသင်းများအလုပ် piling ဆက်လက်။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တူရကီရဲ့အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကမ်းခြေလမ်းနှင့် Samsun-Çorum-Merzifon Samsun-တူရကီအပေါ် Sarp ...
အလုပ်လုပ်မှ Mugla မြို့တော်ဆေးရုံအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ Continues 01 / 06 / 2018 လမ်းအလုပ်အဖြစ် Mugla Sıtkı Kocman တက္ကသိုလ် Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဆိုပါသင်တန်းနှင့်သုတေသနဆေးရုံသို့ access ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စတင်နေတဲ့ချိုးစရာမလိုဘဲဆက်လက်။ ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာများMuğlaမြူနီစီပယ်တှငျထိုအတိုငျးလမ်းကြောင်း, TOKI အိမ်ရာဘက်လုပ်နေတာ၏အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဆေးရုံနှင့် Kocman သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကို Mugla Sıtkıကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ တှငျထိုအတိုငျး INTERCHANGE_NAME စည်းကမ်းချက်များ၌ပြုသောအမှု4ကီလိုမီတာလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်နှင့် ပတ်သက်. ဆက်လက်များအတွက်ခရိုင်၏ညှနျကွားကနေ B ကို Aydin-အရင်း။ အကြောင်း4ကီလိုမီတာရှည်လျားပူပြင်းတဲ့ကတ္တရာနှင့် guardrails အတူအရှည်အတွက်ပိတ်ဆို့ 15 မီတာ, အကျယ် 65 မီတာ 10 သန်း TL အကြောင်းကိုကုန်ကျမည် ...
သူ Work မှ Malatya ယာဉ်အသွားအလာအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ Continues 07 / 08 / 2019 Malatya မြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkan, ထိုရပ်ကွက်Cevatpaşa (နောက်ကွယ်မှာအနီးကပ် Market က) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလမ်း expropriation မှပျက်စီးခြင်းနှင့်ခဲပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ် Selahattin Gürkan၏မြို့တော်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Latif က Okyay လမ်းကို Maintenance နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံညှိနှိုင်းရေးဦးစီးဌာန Mehmet Mert, ညီလာခံအဖွဲ့ဝင်များ, Cevatpaşaမြို့တော်ဝန် Murat ဆူးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Mukhtar barbed: 30 နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်လမ်းမဖွင့်မစ္စတာနိုင်ငံတော်သမ္မတမြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkan Murat မိတ်ကိုCevatpaşaမြို့တော်ဝန်ကျေးဇူးတင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထံမှလေ့လာစရာများဖွင့်လှစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်ခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်း "ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်း 30 ...
ပုဂ္ဂလိကပိုင်နူးညံ့မှဖျက်သိမ်းတံတား3အခြားရွေးချယ်စရာ 26 / 02 / 20133အသစ်ကကားလမ်း၏ရောင်းချရန်တင်ဒါနှင့်ဆက်စပ်သောတံတားနှင့်အလုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်နှင့်အညီဖျက်သိမ်းခဲ့သည့်တံတားအခြားရွေးချယ်စရာပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆင့်မြင့်ကောင်စီ (PHC ကို), များအတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်တင်ဒါကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ညွှန်ကြားချက်အပေါ်ဝန်ကြီးချုပ်အာဒိုဂန်ရဲ့အက်ရှင်, တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်, 'ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရောင်းချခြင်း' 'ပြင်ပအကဲဖြတ်နည်းလမ်းများယူခဲ့ပါတယ်။ Block Sales: အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်တွင်အတွက်အောင်တိုးတက်မှု, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ Reseller ပေးတဲ့အပါအဝင်အောက်ပါအတိုင်းနည်းလမ်းများအားဖြင့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ IPO: ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေ, တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်ပြင်းထန်သောစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ဗူးမှပြောင်းလဲခြင်း, ရှယ်ယာအများပြည်သူရာပူဇော်သက္ကာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။ တံတား ...
တစ်ဦးကစက္ကန့်အစားထိုးတံတားတံတား meleti အပေါ်ပြုမိနေပါသည်
အလုပ်လုပ်မှ Mugla မြို့တော်ဆေးရုံအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ Continues
သူ Work မှ Malatya ယာဉ်အသွားအလာအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ Continues
ပုဂ္ဂလိကပိုင်နူးညံ့မှဖျက်သိမ်းတံတား3အခြားရွေးချယ်စရာ
1 နှင့်အတူ SATSO ။ Completing သစ်ကိုနှစ်ချက်လမ်းမကြီး OSB အကြားတည်ဆောက်ခဲ့
built ပါမောက္ခ Baki Komsuoğluလမ်းမြေပေါ်လူကူးနောက်ဆုံးအခြေအနေ
Köseköyဝန်ဆောင်မှုစ Interchange မြေပေါ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်
3 ။ လေဆိပ်နှင့်3။ သူကတံတားပေါ်တွင်အလုပ်ရပ်တန့်ဖို့မသိရပါဘူး